Inkqubo yokuthintela inxalenye ye-3 | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Ukuyeka Ukuzixhamla Inkqubo yokuthintela enamacandelo amathathu
Ukuthintela ukuxhatshazwa koonobumba be-pornography kubaluleke kakhulu njengoko kuxhasa ukubuyiswa.
Wonke umntu unendima ekuncedeni abanye ukuphepha izilwanyana. Ukuxilwa kwezilwanyana ze-intanethi kuyingozi ngoku. Uninzi lwabantu aluqapheli ukuba luyakumlutha.
Ukuthintela kulula kunokuba abuyele. Uninzi lwabaxhamli banokugqibela ukuyeka ukuziphatha kwabo umlutha. Nangona kunjalo, basenokucinga ukuba bayamlutha ebomini babo bonke ubomi. Oku kukufanelekile ukuphepha.
Inkqubo yokuthintela iSiseko yoNcedo ikhuthaza ukuba ...
Fundisa abantu malunga nendlela inkqubo yokuvuza ngayo isebenza ngayo kwaye kutheni ukuphepha ukujonga iifostile kuyisimo esihle. Jonga amanqaku ethu Basics Brain.
Ukubonelela ngenkxaso yengqondo apho kuyimfuneko. Fumana uncedo usebenzisa 'umntu ogqithwe ngumntu' (eScotland) okanye ngokusebenzisa uqeqesho lweengcali. Enye ingcamango ifunda malunga nemingeni yabanye kwiindawo zokubuyisa. Oku kunokukuphefumlela ukujongana noxinzelelo oludlulileyo okanye ulwalamano olusondeleyo
Fundisa izakhono zobomi ukunceda abantu ukuba bonwabe, baphile ubomi. Wonke umntu ufuna iivenkile ezixhasa ukubonakaliswa kweemvakalelo kunye nokukhula komntu. Oku kubandakanya isondo esempilweni kunye nobudlelwane bemfundo esekwe kwinkqubo yomvuzo elungeleleneyo. Oku kubandakanya ukujolisa kulungelelwaniso, ulwazelelelo, intlonipho nothando ubudlelwane.
Kutheni si cebisa oku?
Ukuthintela kunokunyanga - yile mveliso-i-free-free and cheap
Ukunciphisa izilingo ngokupheleleyo
Isihluthulelo sokonwaba kunye nobomi obude uluthando
Ubulili obuhle kunye nobudlelwane bemfundo
Umbono wethu kukuba wonke umntu abe nokufikelela kumgangatho omhle, ubungqina obusekelwe kubungqina, ukuthembeka kunye nokubandakanya imfundo.
Esi sifundo esichukumisayo ngezizathu ezahlukeneyo, kodwa iziphumo zentlupheko okanye akukho wesini kunye nolwalamano oluhle nolunzulu. Asinakukunyamekela impembelelo ye-intanethi ye-intanethi ibe neentlalo zeentlalo zethu. Kubaluleke kakhulu phakathi kwezizukulwana ezizayo. Ingxaki enkulu yempilo yoluntu.
I-Foundation Foundation izimisele ukuphuhlisa intsebenziswano ukuxhasa ukufumaneka kwezixhobo ezifanelekileyo zokufundisa kuzo zonke izikolo nakwezinye izinto ezifunekayo.
<< TRF 3-Inyathelo lokubuyisela imodeli